kowinmyooo: Wondershare PDF Editor v3.6.2.15 With LicenseKey
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် PC မှာ မရှိ မဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Software လေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Wondershare PDF Editor နောက်ဆုံး Version လေးဖြစ်ပါတယ်..ဒီsoftware အကြောင်းကို တော်တော်သူငယ်ချင်းတွေတော်တော်နားလည်းနိုင်ပြီးသားလိုကျနော်တင်ပေးလိုက်ပတယ်။န
နည်းနည်းပြောလိုက်နော် ငိငိ.. တိန်... ကိုဝင်းလှိုင်ရယ် ကူညီးပါအုံးအကိုလာပြောတော့ကူညီရပြန်ပြီး ၀င်းလှိုင်ရေဒုက္ခ.....ငိငိငိငိ
သူက ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ PDF ဖိုင်တွေကို ဖန်တီး|ပြုပြင်နိုင်ရုံသာမက . Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Epub စတဲ့ အမျိုးပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်..
နောက်ပြီး Scan လုပ်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်တွေကိုပါ ပြောင်းနိုင်သလို..
PDF ကနေလဲ Word, PowerPoint, Excel, EPub စတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်လည် ပြောင်းနိုင်ပါသေးတယ်..
နောက်ပြီး OCR Digitize လုပ်တာ.. ဖိုင်ကို Password ခံတာ.. Forma တွေ လုပ်တာ တွေကိုပါ.. လုပ်လို့ရပါတယ်.. Official Site မှာ $79 ပေးရပါတယ်.. အခုဒီမှာတော့ Free ပါ..
License Key ပါ ထည့်ပေးလိုက်တာမို့ Keygen ကြောင့် တက်မဲ့ Virus အတွက် မပူရပါဘူး.. exe ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ အင်တာနက် ပိတ် ပါ..
FireWall မှာ သွားပြီး Wondershare PDF Editor ကို အမှန်ခြစ်ထားရင်ဖြုတ်ပါ..
FireWall က Wondershare PDF Editor ကို Block လုပ်ထားမှ သုံးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. Firewall က မဟုတ်ရင် ပေးထားတဲ့ Key က ဘန်းထားတယ် ဆိုပြီး ပေါ်လာပါ့မယ်.. အဲ့လိုပေါ်လာရင် အင်တာနက်ကို ပြန်ဖြုတ် Firewall ကနေ Wondershare ကို သေချာအောင် Block လုပ်ထားပါ..
မလုပ်တတ်ရင်လဲ ကိစ္စ မရှိပါဘူး Unregistered Version အနေနဲ့လည်း သုံးလို့ ရပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေဗျာ
Wondershare PDF Editor lets you not only edit PDF files quickly and easily, but also convert them to Word, PowerPoint, Excel and EPUB files. Additionally, thanks to an available OCR plug-in (sold separately), you can edit and convert scanned PDF files. It??™s everything you need to make last minute changes, rewrite entire sections, edit scanned PDF files, or convert to Office formats for heavy duty editing.
- Edit PDFs Exactly likeaWord Processor
- Convert PDF to Word, PowerPoint, Excel and EPUB (Exclusive!)
- Edit or Convert Scanned PDFs (Available in OCR plug-in)
- Secure your PDFs with password protection
- Merge, split and extract PDF pages with ease
- Easily add comments, notes and more in PDF
- Create PDF from Word, PowerPoint, Excel, Text, etc.
Posted by Ko Myo at 8:14 AM